FAQs - Shenzhen JYMed Technology Co., Ltd
Ndezvipi mitengo yenyu?
mitengo edu inozviisa kuchinja zvichienderana nerubatsiro uye zvimwe pamusika zvinhu. We kukutuma ane yoku- wekunge pashure boka rako nesu uwane mamwe mashoko.
Une Odha uwandu?
Hongu, isu zvinoda zvose dzomunyika akarayira kuti kuramba Odha uwandu. Kana muchitsvaka kuti resell asi zviduku zvikuru kwazvo, tinoratidza iwe tarisa Website yedu
Unogona kupa kuMudzidzisi mapepa?
Chokwadi, tinogona kupa mapepa akawanda kusanganisira Zvitupa Analysis / Conformance; Insurance; Origin, uye zvimwe zvinyorwa ekisipoti apo kunodiwa.
Ndechipi avhareji kutungamirira nguva?
Nokuti mimwe, kutungamirira nguva anenge 7 days. Nokuti vakawanda kugadzira, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Kutungamirira nguva vanobudirira kana (1) zvatakawana dhipoziti wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana kwedu kutungamirira nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa ne Kutengeswa wako. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita kudaro.
Ndezvipi muripo nzira iwe kugamuchira?
Unogona kuita mari yedu akaundi, Western Union kana PayPal:
30% dhipoziti pachine, 70% mwero pamusoro kopi B / L.
Chii chigadzirwa garandi?
Isu garandi zvinhu zvedu uye hunoshamisa. kuzvipira kwedu kuna kwako kugutsikana pamwe zvinhu zvedu. In garandi kana kwete, ndicho tsika vekwedu kugadzirisa uye kugadzirisa zvose mutengi nyaya vose zvinogutsa
Unoziva hunovimbisa akachengeteka chokuendesa zvigadzirwa?
Hongu, isu nguva dzose kushandisa yepamusoro ekisipoti kavha. Nesuwo kushandisa njodzi chiputiriso zvinhu ngozi uye yakasimbiswa chando okuchengetera shippers kuti tembiricha tisanzwe zvinhu. Mazvikokota kavha uye non-mureza chiputiriso zvinodiwa vanogona kutongerwa chimwezve mutariri.
Sei pamusoro kutumirwa mari?
Kutumirwa mutengo zvinoenderana nenzira yaunosarudza kuti nhumbi. Express dzinowanzoona kupfuura inoita asiwo nzira dzakawanda zvinodhura. By seafreight ndiyo nzira yakanakisisa kuti mari huru. Chaizvoizvo mitoro rate tinogona chete kukupa kana tichiziva mashoko mari, uremu uye nzira. Tapota kutirovera runhare uwane mamwe mashoko.